यस लेखमा हामी पत्ता के डाँडाको Meru। बौद्ध र हिन्दु धर्म को cosmology मा जो "राम्रो उपाय" अर्थ Sumeru, भनिन्छ, र सबै आध्यात्मिक र भौतिक megagalaktik को केन्द्र रूपमा मानिन्छ। यो शिखर Brahma र अन्य devas को Abode मानिन्छ।
तीन पटक धरती र चन्द्रमा बीच दूरी भन्दा ठूलो छ जो मार्फत (1,392,000 मी) सूर्य, लगभग आकार छ - Purânas यसको उचाइ 80,000 Yojanas (1, 106 लाख किलोमिटर) छ कि लिखित। माउन्ट Meru कहाँ छ? हाम्रो ग्रह को महादेशमा एक - यी लेखोटहरू मा यो Jambudvipa मा स्थित छ भनेर भन्छन्। हिन्दु मन्दिर, कम्बोडिया Angkor Wat सहित एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व छ कैलाश, माउन्ट को Meru र Mandara।
विरासत हिन्दु ब्रह्माण्ड Meru म्याग्निफाइन्ड छ केन्द्र जो एक लोटस, प्रतिनिधित्व। यसको माथि स्वर्ग प्रमुख Deva इन्द्र राखिएको छ। हिन्दु cosmology मा, यो उचाइ ब्रह्माण्डको केन्द्र छ। कहिलेकाहीं यो उत्तरी स्थलीय पोल को केन्द्र मा पार्क। को Puranas अनुसार, Meru माथि वैदिक devas बाँचिरहेका छौं।
केही भारतीय स्रोतहरू माउन्ट Meru बाढी अवधिमा पानी अनदेखी 16 हिमालय cliff रूपमा उल्लेख गरिएको छ। हिमालय चुचुराहरूको को आधुनिक नाम बीच त्यहाँ पनि Meru को शिखर छ, तर सबै भन्दा इंडियन्स विचार पवित्र माउन्ट कैलाश, जो तिनीहरूले कल "शिव को अनन्त Abode।" वास्तवमा, प्रत्येक प्राथमिक स्रोत मा उपाय पनि टाढा उत्तर मा छ, लेखिएको छ।
पुरातन परम्परा उत्तरका लागि भूमि वृद्धि थियो कि उल्लेख गरे। को Scythians, को ईरानी र पुरातन भारतीय सबै प्रसिद्ध नदी उत्तरी पवित्र पहाड बाट बग्ने लाग्यो। टोलेमीकोक्लस्टर नक्सा, रोम मा 1490 मा प्रकाशित भएको थियो जुन आफ्नो पुस्तक "भूगोल", को लागि बनेको देखाइएको रूपमा, पश्चिम देखि पूर्व आर्कटिक महासागर को किनारमा साथ सुत्छन् उच्च भीर अस्तित्व मा राय। यो न्याय को xvi शताब्दीमा सम्म समुदायमा बढाइचढाइ छ।
आफ्नो पुस्तकमा "अध्ययन भारत," माउन्ट Meru Jambudvipa रूपमा साथै MEP र समुद्र को केन्द्र छ, प्रसिद्ध मध्ययुगीन फारसी lexicographer अल-बिरुनी रिपोर्ट।
यस मा "महाभारत" Meru पहाड कहाँ मुख्य शिखर एक रक Mandara छ आकाश, संग एक पहाडी देश रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। तिब्बत र Pamir पहाड दायरा, impenetrable वन र मध्य एशिया को मरुभूमिमा, को ध्रुवीय क्षेत्रहरु र आर्कटिक आश्चर्य - को immovable ध्रुव तारा; यो काम हिमालय परे स्थित क्षेत्रमा वर्णन सूर्य मात्र एक वर्ष एक पटक बढ्दो; तेर्सो विमान घुमेको तारा, प्रत्येक 24 घण्टा को लागि एक सर्कल खत्म (तिनीहरूले अङ्कुराउन थिएन र प्रविष्ट छैन); vysokostoyaschee ठूलो डुबानेवाला; दिन र रात, छ महिना लागि स्थायी; क्षेत्र लामो अन्धकार; अरूणोदय र यति मा। पुस्तक देशमा किनारा मा खडा कि पवित्र पर्वतमा दूध सागर को उत्तरी ढलान माझ्छिन् जो Meru।
को Puranas के लेखिएको छ?
Puranic cosmology अनुसार, Meru शक्तिशाली devas माथि रहन - Brahma र इन्द्र, र यो वरिपरि सबै luminaries Revolve। Indraloka इन्द्र को Abode छ - मुख्य वैदिक devas र पहाड को धेरै शीर्ष मा स्थित छ। Ibid राखिएको र इन्द्र को भव्य महल, बगैंचामा Catfish बोट बढ्दै छ - यो अमरता को पवित्र पेय बनेको छ ठीक किनभने।
Brahma अन्डा ब्रह्माण्ड र धेरै दुनिया (लोकसभा) को हुन्छन्। सबै warlocks तीन आधारभूत समूह संगठित गर्दै छन्: शैतानिक Loki, माथिल्लो र मध्यम (यहाँ र धरती पर्छ)। माथिल्लो दुनिया स्वर्ग र जहाँ devas विविधता बाँच्न उच्च realms को निर्माण गरिन्छ। सबै तहहरू को केन्द्र माथिल्लो स्वर्ग ताले माथि rises जो माउन्ट Meru, गर्न मानिन्छ। तिनीहरूलाई मुनि, सात concentric महादेशमा राखिएको द्वीप। केन्द्रीय एक तला र राउन्ड Jambudvipa भूमि छ। दोस्रो भएको मुख्य भूमि Gomedaka (वा plaksa) भनिन्छ: यो गुड को समुद्र encircles।
तेस्रो मुख्यभूमि - मधुशाला - समुद्र सुधार Sarpis तेल सीमा, एक रक्सी जलाशय Sura र चौथो, Kush भनिन्छ मा स्थित छ। पाँचौ जमीन Kraunchha नाम र ताल खट्टे Dadhi मा स्थित छ। छैटौं महादेशमा - दूध Ksira को सागर मा Svetadvipa -razmeschon। सातौं जमीन - Pushkar - द्वारा राउन्ड Jala एक ठूलो ताजा पानी ताल, उच्चतम पहाड Lokaloka अँध्यारो संसारमा देखि देखिने यूनिभर्स अलग क्षेत्र आसन्न घेरे। विश्वव्यापी खोल अन्डा - कुना वरिपरि Lokaloka अनन्त रात को क्षेत्र निहित छ, र त्यसपछि।
को अन्डा को संरचना लागि यस्तै प्रक्रिया दुवै Upanishads गर्न सामान्य छ, र महाकाव्य र Puranic दन्त्यकथा लागि। तर, फरक दुनिया को नाम र संख्या फरक हुन्छन्।
Vayu श्रीलंका र Meru
हिन्दु परम्परा मा Meru असंख्य पटक उल्लेख गरे। तिनीहरूले भन्ने संकेत हावा-देवता Vayu र रक Meru Bosom मित्र थिए। वैदिक विचारक एक पटक Narada पवित्र रक मा उड्ने, Vayu तिनीहरूको बल देखाउन उक्साए। Vayu भयानक शक्ति संग सम्पूर्ण वर्ष उडायो, तर Garuda सहायता मापन गर्न उड्यो, र आफ्नो पखेटा उनको ढाकिएको। एक वर्ष बितिसकेको छ, र Garuda आराम गर्ने निर्णय गरे। फलस्वरूप, माउन्ट Meru को शिखर, सागर मा संक्षिप्त श्रीलंका टापु मा reincarnated।
पहाड Vindhya, Meru र Agastya
अर्को चिरपरिचित लिजेन्ड अलग भनेर उत्तर र दक्षिण भारत को Vindhya पहाड दायरा एक पटक, बढ्न थाले। उहाँले सूर्य सार्दा हस्तक्षेप गर्न थाले धेरै हुर्किसकेका छ। यस मामला मा, Vindhya पहाड airs मा राखे, र जिद्दी सूर्य भगवान यो bypasses रूपमा माउन्ट Meru (जो धेरै विश्वास रूपमा, उत्तर ध्रुव छ) सूर्य तिनीहरूलाई वरिपरि हरेक दिन हिंडे भनेर। फलस्वरूप, त्यहाँ Vindhya को सजाय को लागि आवश्यक थियो र Agastya यस्तो कार्य पूरा गर्न छान्नुभएको थियो त्यसैले विचारक।
उचाइ जो धेरै को ध्यान आकर्षित पहाड, - Meru। त्यसैले Agastya उत्तर दक्षिण देखि यात्रा गर्न थाले, र बाटो दुर्गम Vindhya रिज मा भेटे। उहाँले माग्छु गर्न थाले , को रिज उहाँलाई दक्षिण भारत जान अनुमति सकून्। Vindhya पहाड revered प्रसिद्ध rishu Agastya, त्यसैले उहाँलाई अगाडि झुके र दार्शनिक र तिनको परिवार दक्षिण जान अनुमति दिइएको थियो। तिनीहरूले पनि लामो उहाँले उत्तर भारत फर्कन थिएन रूपमा माथि बढ्न छैन वादा।
तैपनि Agastya दक्षिण मा बसे, र Vindhya दायरा, उहाँको वचन साँचो, आकार मा कहिल्यै वृद्धि भएन। यसरी, Agastya के शक्ति सम्भव हुन हुनेछ धूर्त द्वारा हासिल।
माउन्ट Meru। स्थान
माउन्ट Meru आज संसारमा कहाँ छ? हिमालय उच्च पहाड पृथ्वी सिस्टम तिब्बती उचाइमा (उत्तर) र Gangetic पठार (दक्षिण) बीच प्रबन्ध छ जो छ। तिनीहरूले नेपाल, भारत, पाकिस्तान, चीन र भूटान को तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र मा फैलयो। यी हाइट्स को तलहटी पनि बंगलादेश को चरम उत्तरी भाग मा अवस्थित छ।
चुचुरोमा क्षेत्र सगरमाथा (हिमालय Hinku उपत्यका) मा छ र नेपाल ट्रयाक लागि उच्चतम शिखर रूपमा वर्गीकृत छ मापन। उपाय उत्तर (6476 मिटर), दक्षिण (6065 मिटर) र केन्द्रीय (6461 मिटर): यो तीन मुख्य रिज समावेश छ। प्रसिद्ध केन्द्रीय माउन्ट Meru? ऊंचाई उच्च चुचुराहरूको मा मार्ग प्राविधिक सजिलो छ रूपमा यसलाई आरोहण लोकप्रिय छ। यसलाई निरन्तर ट्रयाकिङ मा प्रतियोगिताहरु छ किन कि छ।
Archpriest Smirnov दिमित्री Nikolaevich: उद्धरण
Kaaba (साउदी अरब) - इस्लाम को एक तीर्थस्थलका
म चर्च बिदा मा काम गर्न सक्छन्? के यो चर्च बिदा मा के गर्न सक्दैन
बौद्ध: बिदा, परम्परा र चलन
अलेक्जेन्डर Nevsky Lavra को त्रिएक गिरजाघर: विवरण, इतिहास र रोचक तथ्य
खुट्टा ऐंठन: कारण, उपचार र पहिलो सहायता
Caliper इलेक्ट्रनिक - नाप्ने उपकरण को विकास मा अर्को शाखा
स्वादिष्ट घिउ बिस्कुट कसरी बनाउने सिक्न: परीक्षण को तयारी को नुस्खा र विधि
त्यो हुन सक्छ जब Valerian स्तनपान?
को उठाउनेहरू र तिनीहरूले काम गर्ने तरिका हुन्
Velikaya Viktoriya - इङ्गल्याण्ड को रानी
दबाइ "Veroshpiron" वजन लागि: यो मूल्य जोखिम छ?
कसरी घर मा "Tonzilor" (उपकरण) प्रयोग गर्न